Shiinaha oo Buray Chrome ka Albaabka Gudaha Wax soo saarka iyo Warshada |YALIS
Gacan-qabashada Albaabka Gudaha ee Chrome-ka oo la caday
Waxyaabaha: zinc alloy
Mortise: EURO heerka qufulka mortise
Tijaabada buufinta milixda: 72-120 saacadood
Wareegga la tijaabiyay: 200,000 jeer
Dhumucda albaabka: 38-50mm
Codsiga: ganacsi iyo deegaan
Dhammaystirka caadiga ah: matte madow, nikkel satin madow, dahab matte ah
Waqtiga dirida:35 maalmood ka dib lacag bixinta
Tirada Dalbashada Min.200 Qaybood/Qeyb
Awood-siinta:50000 Qeybaha/Qeybaha bishii
Muddada Lacag-bixinta:T/T, L/C, Kaarka deynta
Albaabka YALIS laga bilaabo nashqadaynta ilaa wax-soo-saarka dhammaan waxa sameeyay YALIS.Mid kasta oo ka mid ah YALIS zinc alloy albaabka gacanku wuxuu leeyahay muuqaal patent, oo lagu sameeyay 3 # zinc alloy wuxuuna qaataa 160T-200T mashiinka dhinta si loo hubiyo tayada gacanta albaabka.
Dhamaystir dusha sare ee heer sare ah
Dusha sare ee albaab kasta oo YALIS ah waxaa lagu daweyn doonaa lakabyada 7-8 ee lakabka elektiroonigga ah, taas oo aan ka dhigin oo kaliya in gacanta albaabka quful dhalaalaya, laakiin sidoo kale waxay hagaajinaysaa caabbinta oksaydhka ee gacanta albaabka.Dhib malaha in lagu isticmaalo aagagga badda.
Awoodaha R&D ee la habeeyey
YALIS waxay leedahay koox u gaar ah oo nashqadeeya, kuwaas oo dabooli kara baahida horumarineed ee macaamiisha, waxaana lagu beddeli karaa muuqaal ilaa qaab-dhismeedka gudaha.
Shaqada Ikhtiyaarka ah
Shaqada marinka iyo marinnada.Hoos u leexinta fudud si aad albaabka u furto.Way ku habboon tahay isticmaalkeenna maalinlaha ah.
Shaqada Qarsoonaanta (Doorashada 1)
Ku habboon musqusha, waxaad dhejin kartaa si aad albaabka u xirto.Xaalad degdeg ah, waxaad ku furi kartaa albaabka qalab fiiqan si aad u riixdo biinka.
Codso albaabbada gudaha, u rog rog si aad u xirto albaabka oo fur albaabka furaha farsamada.
Shaqada Qarsoonaanta (Doorashada 2)
Codso musqusha, u rog furka si aad u xirto albaabka.Xaalad degdeg ah, waxaad ka furi kartaa albaabka adiga oo isticmaalaya kaashawiito dalool leh si aad u rogto silida BK ee gaarka ah.
Shaqada Qarsoonaanta (Doorashada 3)
Codso musqusha, u rog furka si aad u xirto albaabka.Xaalad degdeg ah, waxa aad ku rogi kartaa burada musqusha oo leh kaashawiito dalool leh si aad u rogto dunta sirta ah si aad u furto.
Hore: Satin Black Nickel Door Handle Lever
Xiga: Gacan-qabsiga Albaabka Madow ee Deganaanshaha
S: Waa maxay YALIS Design?
J: YALIS Naqshaduhu waa astaan ​​hormuud u ah xalinta qalabka albaabka dhexe iyo kan sare.
S: Haddii ay suurtagal tahay in lagu bixiyo adeegga OEM?
J: Maalmahan, YALIS waa astaan ​​caalami ah, markaa waxaanu horumarinayna alaab-qeybiyeyaashayada nooc kasta oo kala duwan.
S: Halkeen ka heli karaa qaybiyeyaasha summadaada?
J: Waxaan ku leenahay qaybiyaha Vietnam, Ukraine, Lithuania, Singapore, South Korea, Baltic, Lubnaan, Saudi Arabia, Brunei iyo Qubrus.Waxaanan ku horumarinaynaa suuqyo kale oo badan.
S: Sidee baad u caawin doontaa qaybiyeyaashaada suuqa maxaliga ah?
1. Waxaan leenahay koox suuqgeyn ah oo u adeega qaybiyayaasheenna, oo ay ku jiraan nakhshad qolka bandhiga, naqshadaynta agabka xayeysiinta, ururinta macluumaadka suuqa, xayeysiinta internetka iyo adeeg suuqgeyn kale.
2. Kooxdayada iibka ah ayaa booqan doona suuqa cilmi-baarista suuqa, si loo horumariyo horumarinta qoto dheer ee gudaha.
3. Sida calaamad caalami ah, waxaanu ka qayb qaadan doonaa bandhigyada qalabka xirfadeed iyo bandhigyada qalabka dhismaha, oo ay ku jiraan MOSBUILD ee Ruushka, Interzum ee Jarmalka, si aan u dhisno calaamadeena suuqa.Markaa calaamadeenu waxay yeelan doontaa sumcad sare.
4. Qaybiyayaashu waxay yeelan doonaan mudnaanta si ay u ogaadaan alaabtayada cusub.
S: Ma noqon karaa qaybiyeyaashaada?
J: Sida caadiga ah waxaanu la shaqaynaa TOP 5 ciyaartoyda suuqa.Ciyaartoyda haysta kooxda iibka qaan-gaadhka ah, suuq-geyntooda iyo kanaalada xayeysiinta.
S: Sideen ku noqon karaa qaybiyahaaga kaliya ee suuqa?
J: In la is ogaado waa lama huraan, fadlan na sii qorshahaaga gaarka ah ee xayeysiinta sumadda YALIS.Si aan uga doodno in badan oo suurtagal ah in aan noqono qaybiyaha kaliya.Waxaan codsan doonaa bartilmaameed iibsi sanadle ah anagoo ku saleysan xaaladaada suuqa.
gacanta qufulka qolka jiifka
calaamad gacanta quful qolka jiifka
shirkadda gacanta qufulka qolka jiifka
warshad gacanta qufulka qolka jiifka
saaraha gacanta qufulka qolka jiifka
alaab-qeybiyaha gacanta qufulka qolka jiifka
Gacanta Albaabka Qarsoonnimada ee Qolka Musqusha Madow
Qufulka Gacanta Albaabka Gudaha ee Dahab
Gacan-qabsiga Albaabka Musqusha ee Qufulan
Qufulka Gacanta Albaabka Qolka magnetic
Soo saaraha Gacan-qabsiga Dahab ee Rose
Qufulka Xakamaynta Albaabka Daadiska Tayada